ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स पाँचौ वर्षमा प्रवेश, कस्ताे छ वित्तीय अवस्था ? « dainiki
८ आश्विन २०७८, शुक्रबार १४:३०
ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स पाँचौ वर्षमा प्रवेश, कस्ताे छ वित्तीय अवस्था ?
८ असाेज, काठमाडाैँ । ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड आजबाट पाँचौ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । ७३ जिल्लाको विभिन्न भागमा १२३ वटा शाखा संजाल विस्तार गरिसकेको ज्योति लाइफ सर्वाधिक ३५ वटा घातक रोग विरुद्ध ५० लाखसम्मको आर्थिक सुरक्षा दिने एक मात्र कम्पनी हो ।
कम्पनीले विभिन्न १० किसिमका आकर्षक जीबन बीमा योजना जारी गरिसकेको छ । हालसम्म कुल ७ अर्ब लगानी गरेको यस कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३.१० अर्ब कुल बिमा शुल्क सहित हालसम्म ६.९० अर्ब कुल बिमा शुल्क आर्जन गरिसकेको जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: ८ आश्विन २०७८, शुक्रबार १४:३०
प्रिमियर इन्सुरेन्सको संस्थापक सेयर लिलामी आजदेखि बिक्री खुला
२ कात्तिक, काठमाडौँ । प्रिमियर इन्सुरेन्स कम्पनीले आजदेखि संस्थापक सेयर लिलामी बिक्री खुला गरेको छ ।
स्वावलम्बन लघुवित्तले घोषणा गर्याे लाभांश, बोनस र नगद कति ?
२२ असोज, काठमाडाैँ । स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्षसको कमाइबाट सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने लाभांश
२० असाेज, काठमाडाैँ । प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले मृतक केदार बहादुर अधिकारीको परिवारलाई मृत्यु बीमा
रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले घोषणा गर्याे लाभांश
१९ असाेज, काठमाडौँ । रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षसम्मको मुनाफाबाट लाभांश घोषणा गरेको